Ikamva alisebenzi kwaye aluzange lubekho | Martech Zone
Iparanoia ngokubhekisele kwikamva lobukrelekrele bokwenziwa, iirobhothi, kunye noomatshini kufuneka zime. Lonke uguquko kwimizi-mveliso nakwezobuchwephesha kwimbali luvulele abantu ithuba elingasikelwanga mda lokusebenzisa italente yabo kunye nobuchule bokuyila. Ayikuko ukuba imisebenzi ethile ayipheli-ewe bayayenza. Kodwa loo misebenzi ithathelwa indawo yimisebenzi emitsha.
Njengoko ndijonga ejikeleze iofisi yam namhlanje kwaye ndijonga kwakhona umsebenzi wethu, yonke into intsha! Ndiyabukela kwaye ndibonisa kwiAppleTV yethu, simamela umculo kwiAmazon Echo yethu, siphuhlise ii -apps ezininzi zeselfowuni zabathengi, sineenkqubo ze-infographic zabaxumi, kule veki sincede abathengi ababini abaphambili ngemicimbi yokukhangela yendalo, mna ukupapasha oku kwinkqubo yolawulo lomxholo, kwaye sikhuthaza amanqaku ngendlela yemidiya yoluntu.
Inyani yile, andikaze ndiphuphe nakwiminyaka eli-15 eyadlulayo ukuba bendiya kuba ne-arhente yam yentengiso yedijithali kwaye ndingabanceda abathengi ukuba bafumane ukuthengisa kwi-Intanethi. Indlela eya kwikamva ayibi mncinci, iya ivuleka ngokubanzi! Inqanaba ngalinye lokuzenzekelayo lenza inqanaba elitsha lendaleko kunye nokuyila. Ngelixa sisenza itoni yokucinga kunye nomsebenzi wokuyila abathengi bethu, uninzi losuku lwethu sichitha sihambisa idatha, siseta iinkqubo, kwaye sizalisekisa. Ukuba siyakwazi ukunciphisa ezo zinto, sinokwenza okungaphezulu.
Ndiyakholelwa ukuba umceli mngeni wethu, ngakumbi e-United States, kukuba sifundisa kwaye silungiselela abafundi bethu imisebenzi ephelayo. Sidinga inkqubo entsha ngokupheleleyo yokulungiselela izizukulwana ezizayo ukuba zibethe kumhlaba obalekayo kwezi teknoloji zintsha.
Ubomi bobukoloniyali buphuhlise le infographic, Imisebenzi eyi-15 ebingakhange ibekho kwiminyaka engama-30 edlulileyo. Njengoko uphonononga uluhlu lwemisebenzi kunye nomvuzo ophakathi, qaphela ukuba zingaphi ezikwimidiya yedijithali!
tags: umphuhlisi weappzeblogaigosa eliyintloko lokuphulaphulaUbomi bobukoloniyaliumqhubi wedroneikamvakwi-infographicUmhlalutyi wokhuseleko lolwaziimisebenziingcali ye seoumphathi weendaba zentlaloUmyili wamava omsebenzisiumncedisi onokubonaUmhlalutyi wewebhu